SingForYou.net - Than Htar Mhar Lar
Than Htar Mhar Lar
Tags : ကြင်နာတဲ့အပြုံးမင်းမျက်လုံးမှာတွေ့ထားတယ်..အချစ်ရယ်..
By : chittatthu on Jan 15, 2010
Score: 80 Rating: 5.00 Comments: 34
Than Htar Mhar Lar's Description
မင်္ဂလာပါသူငယ်ချင်းများခင်မျာ..ကျွန်တော်ဒီသီ ချင်းလေးကိုလွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်လောက်ကတည်းကအ ရမ်းကိုနှစ်သတ်တဲ့သီချင်းလေးပါ...အခုကျဒီသီချင်း လေးဟာနှစ်သတ်တာထက်ခံစားချက်နဲ့လည်း ကိုက်ညီသွားတော့ဒီသီချင်းလေကကျွန်တော့အ္မတွက်အဓိပ္ပာယ်ပိုရှိသွားပါတယ်..ဒါကြောင့်ဒီသီ ချင်းလေးကိုကြိုးစားပီးသီဆိုထားပါတယ်..ကျွန် တော့်ကိုအားပေးနားစဉ်သွားပါအုံးသူငယ်ချင်း တို့ရေ..........:))))))))))
nyelinnnyo on Mar 29, 2010 0
myautmuulal on Jan 23, 2010 0
mite tal kwar ,,adi song koayan like tar ******** dl p
chawlay on Jan 21, 2010 0
ayan kg tal....takal kg tal....thein lo ya yin thein tar kg par tal....
yehtutkoko on Jan 16, 2010 0
whitekisslay on Jan 16, 2010 0
Mingalar par ko chittatthu yay....thichin kaung layy 1 pote ko so twer tar ayan kaung par tal**************par nor:)arrr payy narr sin twer par tal shin~~
chittatthu on Jan 16, 2010 0
ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုကျွန်တော့်ကိုအမြဲအားပေးကွန့်မန့်ပေးလျက် ရှိတဲ့မwhitekisslayကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်မျာ...အမြဲလည်း အားပေးပါအုံးနော်နားစဉ်ပေးပါ..ကျေးဇူးတင်ပါတယ်....
paradise on Jan 16, 2010 0
Fabulous brother.....you sung smooth and perfect for this "poe kar" song.....some part similiar to his style.....Great singing par....start to till the end.....Perfectly done......sing more song brother..********(btw, pwitn ha pyaw nine par say loh...:D san da pyu lite par tal naw )>>>
မparadiseပါလားးကျွန်တော့်ကိုသံစဉ်ချစ်သူကပြောလို့အမြဲ ကြားဖူးနေတာ...သူကအမြဲပြောတယ်နော်အသံအရမ်းကောင်း တယ်တဲ့..တကယ်ကောင်းတယ်နော်သိလားအခုလိုအားပေးတဲ့ အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်...:)
forevermoe on Jan 16, 2010 0
mingalar par shinnn....awwdta nge chin2yout ka taw tawaso kg kya tar pae ..song lay nae voice nae lite tal wayyy...a yan good tal bro chittathu..kae comment lae shay lout par p norr ..:P *************************************arr pay twer par tal shint ..:D
ဟဟဟငါ့အစ်မforevermoeကအခုလိုကျွန်တော့်တောင်းဆို သလိုကွန့်မန့်အရှည်ကြိးပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြိး အများကြီးတင်ပါတယ်ခင်မျာ..နောက်ပီးအခုလိုဆိုဒ်တစ်ခုလုံး မှာအဆိုအကောင်းဆုံးတွေထဲကတစ်ယောက်ကလာပီးကွန့်မန့် ပေးတဲ့အတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ်ခင်မျာနောက်လည်းကွန့်မန့်ရှည် ရှည်ပေးနော်အစ်မ...ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
susannyunn on Jan 16, 2010 0
jittattu g yay... ma thein seee htar tot par puuu...akone pay lite par p.....chi ta mya starzzzz tay yu lite tot naw.....:))))))))))))))))))))))
မsusannyunnပါလား..အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးလည်းတင် ပါတယ်ကျွန်တော်ကသံစဉ်ချစ်သူရဲ့သူငယ်ချင်းဗျ..သူက လည်းအမြဲပြောလေ့ရှိတယ်နော်မsusannyunnကိုအဆိုးကောင်းလို့တဲ့ဗျတကယ်လည်းကျွန်တော်နားထောင်တာတော်တော်ကို ကောင်းပါတယ်....အဆိုတော်လုပ်လို့ရတယ်ဗျ..အိုကေနော် ကျွန်တော့်ကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးးပါ..
ကိုYinlinHoeရေအစ်ကိုကျွန်တော့်ကိုလာအေးပေးတာဂုဏ်ယူ တယ်ဗျဘာလို့လည်းဆိုတော့ကိုYinLinHOeလိုဆိုဒ်ဖာမှာနေရာ ရအဆိုကောင်းမိတ်ကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ကလေ..အခုလို အားပေးသွားတာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်မျာ....ကျေး ဇူးပါအစ်ကိုရေနောက်လည်းကွန့်မန့်ပေးပါအုံးနော်ကျွန်တော် ဖလားလိုချင်လို့.......:P
sithunaung on Jan 16, 2010 0
wow !! so nice to listen brother..arr pay ner sin twer per tal..5************
ဝိုးကိုsithunaungရေကျွန်တော့်ကိုကွန့်မန့်ပေးတာ2ပုဒ်ရှိပီနော် နောက်လည်းကျွန်တော့်ကိုကွန့်မန့်ဆက်လျက်ပေးမယ်မလား မျှော်လင့်နေမယ်နော်..ဟီးဟီး...အခုလိုနားစဉ်သွားတာကိုကျေး ဇူးတင်ပါတယ်ခင်မျာ...
yizaw on Jan 15, 2010 0
အချစ်တွေကိုသိမ်းထားရတယ် သိမ်းမထားရင်လိုက်လိုက်လုနေလို့ အဟီး အသံနဲ့သီချင်းနဲ့လိုက်တယ်
ငါ့သူငယ်ချင်းလေး..ရည်ဇော်ရေ..ငါ့ရဲ့အာမခံပရိသတ်လေးအမြဲ အားပေးပီးအမြဲတမ်းနားထောင်လျက်ရှိတဲ့သူငယ်ချင်းလေး... ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်....singforyouမှာဆိုရင်သီချင်းတစ်ပုဒ် တင်လိုက်တိုင်းမှာအပြေးလေးရောက်လာပီးနားစဉ်လျက်ရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းလေး...အမြဲဘဲထာဝရကျေးဇူးတင်တယ်သူငယ်ချင်း လေးရေမင်းလည်းဆိုအုံးလေကွာ..မင်းသီချင်းလေးတွေကိုနား ထောင်ချင်လို့ပါဆို....:)))
achitsonethu on Jan 15, 2010 0
so twar tar lat kon kg tal :)))
အမြဲအားပေးလျက်ရှိတဲ့မachitsonethuရေကျွန်တော့်ကိုအမြဲ လာရောက်အားပေးနေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်မျာ...ကျေး ဇူးလည်းတင်ပါတယ်..ခင်မျာမachitsonethuလည်းထပ်ပီးဆို ပါအုံိးနားထောင်ချင်လို့.....:)))
minkha85 on Jan 15, 2010 0
min ga lar par....ayan listen loh kg tal byar.... :) *********4u bro !
hippo on Jan 15, 2010 0
မင်္ဂလာပါရှင် . . . ဆိုသွားတာလေး အရမ်းနားထောင်လို့ ကောင်းပါတယ် . . . ***** . . .
ဟုတ်ကဲ့ပါsis hippoရေအခုလိုနားစဉ်သွားတာကိုကျွန်တော် ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်မျာ...နောက်ကိုလည်းလာပီး အားပေးနားစဉ်သွားမယ်လို့မျှော်လင့်ပါ....:)))
thant on Jan 15, 2010 0
ama ka lon khae tae anit 20 lout htal ka kyiuk tar......d song lay ka kyar pye........lu nge htway yae khann sarr chat nae kite tal pop.....bro so htar tar taw taw kg tal......******(vote pay lo ma ya lo naut mha lar pay mal)
chittatthu on Jan 15, 2010 0
ဟုတ်လားအစ်မ..ဟီးဟီးကျွန်တော်ကမသိဘူးကျွန်တော်ကြား ဖူးတာကတော့လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်လောက်ကဟီးဟီး.... အစ်မအခုလိုကျွန်တော့်ကိုအားပေးကွန့်မန့်ပေးတော့ဂုဏ်ယူ တယ်ဗျဘာလို့လည်းဆိုတော့အစ်မလိုအရမ်းအဆိုကောင်း တဲ့လူတစ်ယောက်ကကွန့်မန့်ပေးလို့လေသိလား...နောက်လည်းအားပေးပါအုံးနော်..အစ်မကွန့်မန့်ပေးထားတာကျွန်တော်သီချင်းတွေထဲမှာသုံးပုဒ်လောက်ဘဲပေးထားသေးတယ်..းးးးးးးးးးး:))))))))))))))
Thanzinchitthu on Jan 15, 2010 0
ip lay yay..mood apyae nae so twar ayan good tal kwar. arr pay nar sin twar p naw..happy par say...
turikimuriki on Jan 15, 2010 0
bro yay... mingalar par ....ayan nice tel.... aye2lay nae .... arr pay thwar par tel... 5* :)))))
ကျွန်တော့်ကိုအမြဲအားပေးလျက်ရှိတဲ့သူငယ်ချင်းအခင်ဆုံးလေး turikimurikiရေအခုလိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင် ပါတယ်သူငယ်ချင်းလေးရေနောက်လည်းအခုလိုအမြဲအားပေး ပါအုံးသူငယ်ချင်းလေးရေ...........
kalaylay221 on Jan 15, 2010 0
min ga lar saung par ........ :O ae hope par woo :D min ga lar par bro yay ................ so thwar tarayan kg par tae ............. arr pay nay tae naw ..... ;D ***** for u
pp01 on Jan 15, 2010 0
Min galar par shin..arr pay thwer tal bro ..kg tal..kg tal:D*****